IRN - International Radio Network - Network maRadio
musha / Amateur Radio / IRN - International Radio Network
IRN - International Radio Network
Chii chinonzi IRN?
IRN (International Radio Network) iVoIP / RoIP system inoshandisa Teamspeak 3 (TS3) iyo inobvumidza vashandisi veredhiyo kuTX / RX isu ing RF kutenderera pasirese vachishandisa zvishandiso zvakasiyana (Nhare mbozha, Mahwendefa, Makomputa nezvimwewo) mahara.
Iyo sisitimu zvakare inobvumidza vashandisi kuti vagadzire vega matauriro ehurukuro kunongedzera kana vega boka reQSO.
Kana iwe uchida kuwedzera yako yekubatanidza, inodzokorora kana hub kune iyo IRN system, ndapota shandisa yedu yekutibata chikamu kutisiya isu tambo.
TS3 inowanikwa paApple, Android, PC, Mac uye Linux. IRN ine yega yega server inobvumira mazana ekubatanidza kamwechete. Kune akasiyana hurukuro mapoka (makwara) mukati ayo anotendera vashandisi izere RX / TX kugona kune akasiyana maredhiyo network uye masisitimu kubva pasirese.
Kuti zviwedzere kunakidza, unogona kushandisa PTT-inogoneswa mafoni senge iwo akanyorwa pazasi. Mazhinji ema hams anoshandisa nhare dzakagoneswa ne PTT, saka vanokwanisa kushandisa IRN nechitsauko chimwe chete sezvavanoshandisa redhiyo yakabata. Mapoka ehurukuro e IRN anogona kuwanikwa kuburikidza neGPRS / 3G / 4G / Wifi kana RF (zvinoenderana nevanodzokorora).
Ndokumbira utarise: Iyi sisitimu yakasununguka kushandisa kune ese asiri-marezinesi * & marezinesi maham. Rarama ham-radio vanodzokorora vanogona kungowanikwa chete neane marezinesi hams.
* Vasiri-marezinesi vashandisi vanofanirwa kunyorera kuve nhengo yeIRN kuitira kuti vafonerwa vanogadzirirwa ivo (Usanetseke, zvakare mahara).
Midziyo inotevera ine yakazvipira PTT bhatani iyo ichaita kuti ruzivo rwako ruve nani kana uchishandisa IRN.
Tarisa vhidhiyo yedemo
Rarama QSO uchishandisa IRN neRadio Radio - Inrico TM-7
Zello kuGerman - nharaunda huru
Maitiro ekumisikidza AT & T 4G / LTE pane Rfinder maredhiyo
2 pfungwa pa "IRN - International Radio Network"
Mhoro. Ndine s Sure F25 uye ndine maZello nema IRN maapp. Pandinodzvanya ptt bhatani kuti nditaure pa IRN iyo Zello app inovhura. Ndingamisa sei izvi zvichiitika ndapota?
Ndiro basa rinosemesa kubva pakuburitswa kwekupedzisira Zello. Unofanirwa kuita zvinotevera (ndakazviita neangu F22): Govera iyo PTT bhatani kuChikwata Taura 3 uye, paZello, bvisa PTT Bhatani. Wobva waita mepu bhatani idzva rePNT paZello, izvo zvinogona, semuenzaniso, bhatani reSOS.
Kana iwe ukashandisa zvakanyanya Zello kupfuura TS3, pamwe unogona kuzviita neimwe nzira kutenderera.